Home Wararka Ciidamada Itoobiya oo dad shacab ah ku xasuuqay Gobolka Oromada
Ciidamada Itoobiya oo dad shacab ah ku xasuuqay Gobolka Oromada
Sida ay ku soo waramayaan dad ku sugan magaalada Gimbi ee ka tirsan Gobolka Oromada ayaa sheegaya in ay xiisad xun ka taagantahay magaalada kadib markii maalin shaly markii ay ciidamada Itoobiya ay ku dileen labo wiil oo dhalinyaro ah.
Siidi ay sheegtay idacaada VOA qeybta Oromada ugu yaraan laba qof ayaa lagu dolay shalay markii ay ciidamada Itoobiya rasaas kufureen dad shacab oo waxba galabsaniin.
Dadwaynaha kudhaqan magaalada Gimbi iyo nawaaxigeeda ayaa siwayn ugu soo hor jeeden wiilasha lalayaay. Dhinaca kale ciidamo aad u badan oo kuwa Fedaralka ah ayaa lasoodhoobay xaafadaha magaalada kuwaas oo sida lasheegay inay ka hor imadaan shacbka hadi ay kacdoon ama isku dhacyo ka qaraxda magalaada.
Previous articleFull-fledged military dictatorship is around the corner in Ethiopia
Next articleGuddigii Maaliyadda oo lakala diray. Muxuu ku bedeshay Gud. Mursal (Xog & Caddeyn)
Dad iibinaayay Hilibka eey-ga oo gacanta lagu dhigay
Deni oo Boosaaso u tagaya xalinta khilaafka PSF